किरात उत्पतिको कथा - Laltin.com
बाहिङ किरात मुन्धुम अनुसार बाहिङ किरातहरुको पहिलो मानव धरती र आकाशको संसर्गबाट जन्म भएको हो । पहिलो मानव महिला थिइन् । उनको नाम निनिरेङ्मा थियो । उनी उमेर अनुसार बढ्दै गइन् । १६ वर्षको उमेर पुगेपछि उनलाई रजश्वला भयो । उनलाई एक प्रकारको छटपटाहट भयो । उनी यताउति कुदिरहिन् । छटपटाहट रोकिएन । त्यसपछि उनी एउटा डाँडामा पुगिन् । त्यहाँ हावा चलिरहेको थियो । उनले हावा तापिन् । उनलाई शीतल भयो । त्यसपछि उनी गर्भिणी भइन् । उनले पनि महिला नै जन्माइन् । उनको नाम हो मरेङ्मा । मरेङ्मा पनि विस्तारै बढ्दै गइन् । जब उनको उमेर १६ वर्ष पुग्यो । उनले म कसरी जन्मिए आमा भनेर प्रश्न गरिन् । आमाले आफ्नाे सबै व्यहोरा छोरीलाई बताइन् । हावा तापेको, हावा तापेपछि शीतल महशुस गरेको, त्यसपछि गर्भिणी भएको वृतान्त छोरीलाई सुनाइन् । आमाको कुरा सुन्ने बित्तिकै मरेङ्मा हावा ताप्न डाँडामा पुगिन् । तर, हावा उसको नजिक आएन । मरेङ्माले फर्केर आएर आमालाई भनिन्– म पनि तपाईँजस्तै हावा ताप्न गएको थिए, मेरो छेउमा हावा चलेन र मैले हावा ताप्न पाइनँ ।’ छोरीको कुरा सुनेपछि आमा निनिरेङ्माले भनिन्– हेर छोरी हावा तिम्रो बाउ हो । ऊ तिमीसँग आउन मिल्दैन ।’ अब के गर्ने भन्ने छलफल भएपछि आमाले अब तिमी केटा खोजेर बिहे गर्नू भन्ने आज्ञा दिइन् । त्यस समय सृष्टिकालको मिर्मिरे भएकोले कोही मानव थिएनन् । मरेङ्माले यसो आकाशतिर हेरेको शुक्र झलमल्ल बलेको देखिन् । मरेङ्माले शुक्रसँगै बिहे गर्ने भनेर लमी बनाएर समाचार पुर्याउन गरुडलाई आकाशमण्डलतिर पठाइन् । धरतीबाट गरुड उडेर जाँदा धेरै टाढा भएकोले शुक्र अस्ताएछ । र गरुड त्यहाँ पुग्दा बृहस्पति आएर बसेको भेटेछ । गरुडले बृहस्पतिलाई मरेङ्माले पठाएको बिहेको प्रस्ताव सुनायो । बृहस्पतिले गरुडको समाचारको विश्वास गरेनन् । र भने– मलाई मन पराएको होइन होला, मरेङ्मा म भन्दा धेरै राम्री छे । म त गलगाँड भएको नराम्रो छु ।’ बृहस्पतिले मरेङ्माले मन पराएको मेरो दाजु शुक्रलाई होला भनेर जवाफ दिए । तर, गरुडले तपाईँ नै हो भन्दै जिद्दि गरे ।
बृहस्पतिले भने– मलाई त विश्वास छैन, तिमी भन्छौ भने म आउँछु । तर मरेङ्माले मेरो अपमान गर्न पाउदिनन् । यो कुरा राम्रोसँग उनलाई सम्झाउनू र पूर्णिमाको रातमा मात्र एक रातको लागि म आउँछु भनेर गरुडलाई भने । यो कुराको वाचाबन्धन भएपछि बृहस्पतिले मरेङ्माको लागि सुनको काइयो गरुडमार्फत उपहार पठाए । बृहस्पतिले गरुडलाई बिदा गर्ने बेला भनेका थिए म आउँदा सिरानीको व्यवस्था राम्रो गर्नु, मरेङ्माले मेरो अपमान पटक्कै नगरोस् भनेका थिए । यही सल्लाह अनुसार गरुड धरतीमा फर्किए । मरेङ्मालाई सबै समाचार सुनाए । पूर्णिमाको रातमा शुक्र आउँछ, तिमीलाई यो सुनको काइयो उपहार पठाएको छ भनी उपहार दिए । त्यो रात राम्रो सिरानी बनाएर बस्नु भनेको छ भनी मरेङ्मालाई सुनाए । त्यही बृहस्पति गरुडको पूर्व सल्लाह अनुसार तयार भएर मरेङ्मा शुक्रलाई पर्खेर बसेकी थिइन् । तर, आयो बृहस्पति, घाँटीमा गलगाँड लिएर । मन पराएको केटा नदेखेपछि मरेङ्मा रिसले भागिन् । बृहस्पतिले पहिल्यै सर्त राखेका थिए कि मेरो अपमान नहोस् भनेर । यसमा बृहस्पतिको कमजोरी देखिदैन र मरेङ्माको पनि कमजोरी देखिदैन । समाचारदाताले सत्य बोलेको छैन । सम्झौता उल्लंघन भएपछि फेरि बृहस्पति र गरुडले सल्लाह गरेर मरेङ्मालाई सजाय दिने निर्णय गर्छन् । उनीहरुको निर्णय हुन्छ धरतीको पानी सुकाउने र मरेङ्मालाई तिर्खा मेट्न बृहस्पतिको पिसाब पिउन लगाउने ।
धरतीको सबै पानी सुकाएर बृहस्पतिले बनमा रहेको एउटा रुखको टोड्कामा पिसाब फेरेर आकाशमण्डलको आफ्नाे कक्षमा फर्किए । पृथ्वीमा पानी सुक्यो । मरेङ्मालाई प्यासले सताउन थाल्यो । उनी बनजंगलको शीतल छहारी खोज्दै हिडिन् । शीतल खोज्दै जाँदा एकदिन एउटा रुखको छहारीमा पुगेर बसिन् । सानो फिस्टा चरा आएर रुखको हाँगामा बसेर नाच्दा मरेङ्माको जिउमा पानीको छिटा पर्यो । त्यो फिस्टाको नाम बाहिङ भाषामा झिर्किली हो । मरेङ्माले पानीको छिटा मेरो जिउमा पर्यो, म धेरै दिनदेखि तिर्खाएकी छु पानी कहाँ छ भनेर फिस्टासँग सोध्दा ऊ माथि रुखको टोड्कामा छ भनेर फिस्टाले देखायो । त्यही टोड्कामा बृहस्पतिले पिसाब फेरेका थिए । त्यही बृहस्पतिको पिसाब पानी सम्झेर मरेङ्माले पिइन् । त्यसपछि मरेङ्मा गर्भिणी भइन् ।
यसरी बाहिङ किरातको उत्पति भएको भनेर बाहिङ तुम्लो वा मुन्धुमले विश्वास गर्दछ । मरेङ्माले बच्चाहरु जन्माउने बेला प्रकृतिमा रहेका विभिन्न थरिका प्रजातिहरु जन्माउछिन् । पहिलोचोटिको बोटविरुवा जन्मिन्छ । त्यसमध्ये बाहिङ भाषामा ‘कडाम चु’ भन्ने काँडेझ्यार छ, त्यो जन्माउँछिन् । त्यो काँडेझ्यार जन्माउदा आमाको अंगहरु कोरेर घाउ बनाएको कारणले त्यो काँडेझ्यारलाई आमाले सराप दिएछिन् । तिमी रुखोपाखोमा मात्र उम्रिनू भनेर । त्यो काँडेझ्यार आजभोलि पनि रुखोपाखोमा मात्र भेटिन्छ । दोस्रो चरणमा मरेङ्माले जीवजन्तु जन्माइन् । मरेङ्माको पहिलो छोरा बाघ, दोस्रो छोरा बाँदर र तेस्रो छोरा मान्छे हो । उनले यो संसार हेरचाह गर्ने मान्छे जन्माउनलाई शुक्रसँग विवाह गर्न खोजेकी थिइन् । तर थाहै नपाई बृहस्पतिबाट सन्तान जन्माउन पुगिन् । उनको ध्येय थियो मान्छे वा निनिनाप्चा जन्माउने । बाँदर र मान्छेमा धेरै फरक नदेखिने । त्यसैले बाँदर जन्मिने बित्तिकै मान्छे यही हो भनेर मरेङ्माले बाँदरलाई सुनको माला लगाइदिएछ । जसलाई चिचिमाला भनिन्छ । बाँदरलाई सुनको माला लगाइदिएपछि पो झन राम्रो मान्छे जन्मियो । आमाले बाँदरलाई फकाएर त्यो माला भाइलाई लगाउन दिइन् । पछि भाइले लगाएको खेतीपाती सित्तैमा खान पाउँछौ भनेर फकाए । अहिलेसम्म पनि बाँदर भेट्दा चिचिचुचु गरेर कराउने गर्छन् । त्यो चिचिमाला फिर्ता मागेको हो भन्ने चलन बाहिङ किरातहरुको विश्वास रहिआएको छ ।
बाहिङ मुन्धुम अनुसार यही पृथ्वीकै पहिलो परिवार एक आमा र तीन छोराहरुको घरगृहस्ती चलिरहेको थियो । बाघ र बाँदर अल्छे भएकोले सबै काम मान्छेले नै गर्नुपर्दथ्यो । एक दिन मान्छे एउटा विरुवाको हाँगामा फल टिप्न जाँदा छाँयामा बाघ झम्टेको मान्छेले देखेछ । आफूलाई मार्न झम्टेको देखेर मान्छेले बाघलाई धनुषवाणले हानेर मारिदियो । बेलुकी आमाले मान्छेलाई तिम्रो दाजु बाघ खै ? भन्दा मलाई मार्न झम्टियो मैले धनुषवाणले हानेर मारे भनेपछि आमाले मन्त्र गरेर बाघलाई बचाएछ । आमाले तीनैजना मिलेर बस्नू भनी अह्राइन् । यसरी दिनहरु बित्दै थिए । एक दिन फेरि मान्छे आमा, बाघ र बाँदरलाई घरमा छोडेर काममा गए । बेलुकी घरमा फर्केर आउँदा मान्छेले आमालाई देखेन । मान्छेले बाघलाई सोध्यो आमा खोई भनेर । बाघले पानी लिन गएको छ भन्यो । धेरै बेरमा पनि आमा नफर्केपछि मान्छे आमालाई खोज्न कुवामा गयो । त्यहाँ आमा थिएनन् । त्यसपछि मान्छेले बाघलाई शंका गरेर तिम्रो मुख आँ गर भनेर मुख हेर्दा आमाको कपाल बाघको दाँतमा अड्किएको देख्यो । मान्छेलाई प्रष्ट भयो कि बाघले आमा खाएछ । यो घटनापछि तीनैजना बीच छुट्टिएर बस्ने सल्लाह भयो । सल्लाहले अंश लगाए । बाघको भागमा वनजंगल, बाँदरको भागमा भिरपाखा र मान्छेको भागमा घरबारी पर्यो । यो बाहिङ मुन्धुममा पारिवारिक पहिलो घटना वा सभ्यता हो । वैज्ञानिक चाल्स डार्बिनले पनि बाँदर र मान्छेको सन्दर्भ जोडेका छन् । उनको मत अनुसार एक कोषीय जीव अमिबा हुँदै डाइनोसरसम्म विकास भयो । एवम् रितले विकास हुँदै जाँदा बाँदरमा परिणत भयो । बाँदरबाट मानिसमा विकसित भयो भन्ने विचारले संसारमा डार्बिन विश्वविख्यात भए । अब डार्बिनको सिद्धान्त प्रमाणित हुनलाई पशुपतिनाथ वरिपरिको बाँदरहरु कहिले मान्छेमा परिवर्तन हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
श्लोकमा उल्लेखित किरात क्षेत्र
भाषाको इतिहास हेर्दा लिखित रुपमा लामो इतिहास भएको भाषाहरुमध्ये पूर्वमा संस्कृत र पश्चिममा ग्रिक र ल्याटिन भाषाहरु भेटिन्छन् । इतिहास पत्ता लगाउन प्रायः यिनै भाषामा लेखिएका कृतिहरुको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता छ । संस्कृत वाङ्मयमा किरात जाति र किरात सभ्यताको उल्लेख जताततै गएको पाइन्छ । तर संस्कृतका विद्वानहरुले डा. स्वामी प्रपन्नचार्य बाहेक कसैले पनि चर्चा गर्न चाहेको देखिदैन । वर्तमान नेपाल देश किरात सभ्यताभित्र पर्ने मुलुक हो । यसबारेमा न इतिहासकार न कवि न साहित्यकार कसैले पनि यति ठूलो र गौरव बोकेको किरात सभ्यताको बारेमा कहीकतै कलम चलाएको देखिदैन । नेपाल देशको इतिहास झुटको पुलिन्दामाथि तयार गरेको देखिन्छ । यहाँका हरेक गल्ली, खोलानाला, पहाड, पर्वत सबैका नाम किरात भाषा रहेकोमा पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तार अभियानसँगै नामहरु हिन्दुकरण गर्दै लगेको र हालसम्म पनि पृथ्वीनारायणको उत्तराधिकारीहरुले निरन्तरता दिदै आएको छ । मरुतन्त्र हिमवत् खण्डामा उल्लेख गरिए अनुसार किरात देश कति ठूलो थियो भन्ने कुरा संस्कृत श्लोकमा निम्न अनुसार लेखिएको छ ।
‘किरातदेशोदेवेशि विन्ध्ये शैले च तिष्ठति ।
काश्मिरन्तु समारश्य कामरुपातु पश्चिमे ।
भोटान्तदेशोदेवेशि मानसेशाच्च दक्षिणे ।
मानसेशा पक्ष पूर्वे चीनदेशः प्रकीर्तित ।
कैलालीशं(तिर) समारश्य सरयुयोनितः परे ।
नगदेशे महेशानि महाचीनानीमिध्यो भवेत ।
नटेश्वर समारश्य योगिन्यन्तं महेश्वरी ।’
यस संस्कृत भाषामा लेखिएको श्लोक अनुसार किरात देश कति ठूलो थियो भन्ने प्रष्ट्याएको छ । किरात देशको सिमाना विन्ध्याचल पर्वतसम्म फैलिएको थियो । काश्मिरदेखि कामरुपासम्म पश्चिममा फैलिएको थियो । हाल टिबेट भनिने चीनको स्वशासित क्षेत्रदेखि मानसरोवरसम्म दक्षिणतिर फैलिएको थियो । त्यस्तै पूर्वमा मानसरोवरबाट चीन देशसम्म थियो । कैलाली वा हालको महाकाली नदीको तीरबाट भारतको तत्कालिन सरयु नदी परसम्म फैलिएको थियो । भारतमा रहेको नागाल्याण्ड वा नगदेशबाट हालको मंगोलियासम्म किरात देश फैलिएको थियो । दक्षिण क्षेत्रमा भारतमा रहेको स्थान नटेश्वर योगीनी हुँदै महेश्वरीसम्म सिमाना फैलिएको थियो । यस प्रमाणहरुले के प्रमाणित हुन्छ भने आदिम कालमा किरात देश आधा एसिया महादेशको क्षेत्रमा ओगटेर फैलिएको थियो ।
Previous: पढ्नुसः एमसीसी सम्झौता
Next: बुङ्कोट विद्रोह र लखन थापाको मृत्युको रहस्य
पढ्नुसः एमसीसी सम्झौता